Chakagadzirwa Intelligence Algorithms - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
chakagadzirwa Intelligence, Developers, Development maitiro, newgenapps
chakagadzirwa Intelligence mutauro wemuchina uko muchina unogona kuita uye kufunga semunhu. chakagadzirwa Intelligence ine simba rakakura pahupfumi hwenyika uye kuwedzera kwayo mazuva ese nekukura kukuru. Sezvo AI iri kukura zuva nezuva, mashandisiro ayo ari mumunda wega wega seRobotics, Zvekurima, Nezveutano, Marketing, mari nezvimwe zvakawanda. Kune mhando dzakasiyana Machine kudzidza ndiko kuti:-Kutariswa Learning, Vasina kutariswa Learning, Kusimbisa Learning, uye Ensemble Learning
MuMuchina Mutauro, michina inoshandisa zvimwe zvekushandisa uye nekuita masvomhu logics, inogadzira zvinobuda. Machine Mutauro unozivikanwa se subfield ye chakagadzirwa Intelligence. asi chakagadzirwa Intelligence Algorithm inoshandisa zvese zvinobuda uye zvekuisa panguva imwe chete kuitira kuti ibudise mitsva yekubuda kwedata mushure mekuwana zvitsva.
Mhando dzeAI Algorithms
Chimwe chezvikamu zvikuru zve chakagadzirwa Intelligence Algorithm iri kusarudza iyo chaiyo muchina wekudzidza maitiro uye nzira yekugadzirisa chero basa. Kune akawanda maalgorithms mumunda weTech nekushandisa izvo, masangano nemapoka akasiyana ari kuwana mabhenefiti munzira dzakasiyana. Mhando dzakasiyana dzeAlgorithms dzinogona kushandiswa kugadzirisa matambudziko akasiyana. Pazasi pane akasiyana marudzi e chakagadzirwa Intelligence Algorithms.
1. Kupatsanura algorithms
Kupatsanura Maalgorithms anouya muchikamu cheAnotarisirwa Machine Learning, kupi kwekutanga maitiro, seti yedhata inoda mamwe makirasi. MuKupatsanura Algorithms, iwo maalgorithms anoshandiswa kupatsanura nyaya kusiana mumhando dzakasiyana dzemakirasi kufanofungidzira makirasi eanopihwa. Chinangwa chikuru chegadziriro Algorithm ndeyekuverenga chikamu che data. Semuenzaniso-Rongedza maemail se spam kana kwete. Ma algorithms akasiyana anoshandiswa muKupatsanura Maalgorithms anotevera.
Rudzi rwealgorithm urwu runotevera the Bayes theorem, iyo inotevera nzira yekufungidzira. Kune yega yega kirasi, iyo algorithm ine seti yezvakaitika zvisati zvaitika. Aya maalgorithms anokurumidza-uye anowanzo shandiswa mukusefa kwe spam.
Sarudzo miti inowanzo shandiswa senge kuyerera machati.
Sango risina kujairika
Iboka remiti yakasiyana uko. Iko kupihwa kwakapihwa kwakakamurwa uye kunodyiswa mumiti yakasarudzika yemiti. Mhinduro yedata ndiyo avhareji kuburitsa yemiti yese yesarudzo Aya algorithms ari echokwadi chaizvo kana achienzaniswa neZvisarudzo
Tsigira mavheti emuchina
Tsigiro Vector Machines akasarudzika anoisa data nekushandisa iyo hyper chirongwa. Inoedza kuronga iyo data ine yakanyanya margin pakati pemakirasi maviri.
Mune iyi algorithm, mashanga ese e data akapatsanurwa kuita akasiyana makirasi kuti awane mharidzo nyowani.
2. Kudzvinyirira algorithms
MuRegression algorithms, maalgorithms anogona kufanotaura kukosha kwezvinobuda zvichienderana nedata rekuisa iro rinodyiswa mu kudzidza system. Iyo yakakurumbira algorithm inouya pasi pechikamu cheanotariswa Machine kudzidza algorithms. Mimwe yemashandisirwo anonyanya kushandiswa ekugadzirisa maitiro ari kufanotaura mamiriro ekunze, kufungidzira mutengo wemusika wemari, nezvimwewo maalgorithms akasiyana anoshandiswa muRegression Algorithms anotevera.
Ndiyo mhando yakapusa uye inoshanda yeAlgorithm. Iyi algorithm inodhonza mutsetse uri nyore pakati penzvimbo dzakasiyana dzedhata uye nekushandisa yakanakisa mutsetse, fungidzira hutsva hutsva
Lasso Regression inoshanda pakuwana iyo subset yekufungidzira vales iyo inoderedza kukanganisa kwePrediction mumhinduro inoshanduka.
Binary Classification inoshandiswa muRogistic regression. Kufungidzira kukosha kwevatengi kwehupenyu, kukosha kweimba mimwe mienzaniso yeiyi algorithm.
Kana paine zvimwe zvekufungidzira zvinoshanduka, A Multivariate regression algorithm inoshandiswa.
Yakawanda Kudzora Algorithm
Iko kusanganiswa kwekudzoka kwemitsetse uye kusagadziriswa kwemutsara.
3. Kuunganidza algorithms
Clustering Algorithms inouya pasi pechikamu chisina kuchengetedzwa Machine kudzidza. Maitiro emhando idzi dzealgorithms kupatsanura nekuronga iyo data mumapoka akasiyana zvichienderana nekufanana kwavo mukati memitezo yakafanana yeboka. Nekudaro mune iyi Algorithm, chinangwa chikuru ndechekuunganidza zvinhu zvakafanana muboka umo zviri nyore uye zvinobudirira kugadzirisa chero basa rakapihwa. Semuenzaniso, panguva ipi neipi yekubiridzira mumakadhi ekubhengi kana makadhi echikwereti, zviitiko zvese zvekunyepedzera zvinogona kurongedzwa zviri nyore. Ma algorithms akasiyana anoshandiswa muRegression Algorithms anotevera.
Mune iyi algorithm, inounganidza mapoinzi akafanana uye inoabatanidza pamwechete kuita sumbu umo K inomiririra masumbu akasiyana. K-Means Clustering ndiyo yakapusa isina anotariswa kudzidza Algorithm
Fuzzy C-zvinoreva algorithm
Fuzzy C-zvinoreva Algorithm inoshanda paPamwe. Inomirira FCM.
Iyi Algorithm iri zvichibva pakuparadzirwa kweGaussia.
Hierarchical kuunganidza algorithm
Kune mhando mbiri dzeiyi algorithm, Divisive clustering, yekumusoro-pasi nzira uye Agglomerative clustering, yepasi-kumusoro nzira. Mushure kudzidza iyo data mapoinzi uye kuita zvakafanana kucherechedzwa, iyo Hierarchical Clustering Algorithm inoronga masumbu ehierarchical kurongeka.
Aya anongova mamwe ema algorithms. Mune izwi rekuti Kururamisa nekumhanyisa, Algorithm ine zvayakanakira nezvayakaipira. AI yakapa nyowani kumeso kune tech mumatunhu ese kugadzirisa matambudziko akaoma. Yega algorithm inogona kusarudzwa pane iyo inoda data data